CeleLove - Page 256 of 425 - Welcome From Cele Love
July 12, 2019 Cele Love 0
“ငွေမကိုင်ဘူး၊ဖိနပ်မစီးဘူး၊ မိခင်က ငိုပြီးတားတဲ့ကြားက ရဟန်းဝတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ နယ်သာလန်က ဦးအဂ္ဂ” မော်လမြိုင်က အပြန် သထုံ ရွှေဆံတော် ဘုရားရှေ့ ကားကြုံတားနေတာ ရှေ့က ကားက ရပ်မပေးတာတွေ့လို့ ကိုယ်တွေက ရပ်ပီး မေးလိုက်မိတာ လှည်းကူးကို တဲ့။ အဲ့အချိန်မှာ သင်္ဃန်းကို လက်ကတော့ထိုး […]
အရှိုးရာတွေ ထပ်တလင်းကျန်းနေတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာ “ကရုဏာအိမ်လေး”ကလေးတွေ သနားပါတယ်…
အရှိုးရာတွေ ထပ်တလင်းကျန်းနေတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာ “ကရုဏာအိမ်လေး”ကလေးတွေ သနားပါတယ်… မိဘမဲ့ဂေဟာလေးရဲ့ နာမည်က “ကရုဏာ အိမ်လေး” ဂေဟာလေးရဲ့ နာမည်က ကြားလိုက်တာနဲ့ နွေးထွေးမှု ကြင်နာမှုတွေရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ခြုံလွှမ်းသွားပါတယ် …. ။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ မိဘမဲ့ကလေးလေးတွေဟာ ကြင်နာမှုထက် နာကျင်မှုတွေ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ […]
ကြည့်ပြီးတဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေသွားစေမယ့်် ဗီယက်နမ်မင်းသမီးလေး Elly Tran ရဲ့ Video
ကြည့်ပြီးတဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေသွားစေမယ့်် ဗီယက်နမ်မင်းသမီးလေး Elly Tran ရဲ့ Video ပုရိသတွေကြားမှာ လက်တလောမှာ အရမ်းကို ရေပန်းစားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူမရဲ့ နာမည်ကတော့ Elly Tran ပါ။ဗီယက်နမ်မင်းသမီးလေးပါ။သူမရဲ့ အကောင့်ကို ၀န်းရံထားတဲ့သူတွေထဲမှာ မြန်မာအမျိုးသားတွေ လည်း အများကြီးပါတာကို တွေ့ရပါတယ်။ဗီယက်နမ်သူလေးတွေကို မှ ကြွေပါတယ်ဆိုတဲ့ Shwemom […]
ဘရာမဝတ်ပဲ လေဆိပ်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ MAMAMOO အဖွဲ့ဝင် Hwasa ရဲ့ (ရုပ်သံ)
ဘရာမဝတ်ပဲ လေဆိပ်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ MAMAMOO အဖွဲ့ဝင် Hwasa ရဲ့ (ရုပ်သံ) MAMAMOO အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hwasa ကတော့ လတ်တလောမှာ ဘရာမဝတ်ပဲ လေဆိပ်ကို ရောက်ရှိလာတာကြောင့် လတ်တလောမှာ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူ ကိုရီးယားလူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စား ၊ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိနေပါတယ် ။ လုံးကြီးပေါက် […]
၁၀ နှစ်​အရွယ်​မှာ လိင်​ပို်​င်းဆိုင်​ရာအကြမ်းဖက်​ခံခဲ့ရ​ကြောင်း ရင်​ဖွင့်​လာခဲ့တဲ့ မင်းသမီးခရစ္စတီးနား …
၁၀ နှစ်​အရွယ်​မှာ လိင်​ပို်​င်းဆိုင်​ရာအကြမ်းဖက်​ခံခဲ့ရ​ကြောင်း ရင်​ဖွင့်​လာခဲ့တဲ့ မင်းသမီးခရစ္စတီးနား … သမီး​လေး ဗစ်​တိုးရီယားရဲ့အမှုကိစ္စဟာ မလိုအပ်​ပဲ အရှုပ်​အ​ထွေးများစွာနဲ့ ပြည်​သူအများ ရင်​နဲ့မဆံ့ခံစား​နေရတဲ့ အမှုကိစ္စတစ်​ခုဖြစ်​သလို သက်​ငယ်​မုဒိမ်းမှုကို အထိ​ရောက်​ဆုံးကိုင်​တွယ်​​ပေးဖို့ဟာ ALinnMyay ပရိသတ်​ကြီးနဲ့အတူ ပြည်​သူအများလိုလား​နေတဲ့ ရင်ထဲက​ဆန္ဒအမှန်​ဖြစ်​ပါတယ် …။ နာမည်​ကြီးအနုပညာရှင်​​တွေဟာလဲ ဒီသက်​ငယ်​မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်​သက်​ပြီး ပြည်​သူ​တွေ နဲ့ တစ်​သားတည်းရှိ​နေခဲ့တာ […]
မူကြို သက်ငယ်မုဒိန်းမှ ဆရာမသားကို ဖမ်းလိုက်ပါပြီ ။​​​​​
မူကြို သက်ငယ်မုဒိန်းမှ ဆရာမသားကို ဖမ်းလိုက်ပါပြီ ။​​​​​ ခ​လေးမငယ်လေး တယောက် နေ့က ​လေးထိန်းကျောင်းမှာ မုဒိမ်း အကျင့်ခံရတယ် …။ ကျင့်တဲ့ မုဒိမ်းသမားက ခ ​လေး ဆရာမရဲ့ သား ။ အရွယ်က ၁၂ နှစ်သား ကောင်လေး ပါ …။ […]
” ​အ​မေ့ကိုသတိမရဘူးလား “ဆိုတဲ့ အ​မေ့ရဲ့​မေးခွန်းကို သားရဟန်ြး​ပန်​လိုချင်​​နေမိတယ်​…အမေ…
” ​အ​မေ့ကိုသတိမရဘူးလား “ဆိုတဲ့ အ​မေ့ရဲ့​မေးခွန်းကို သားရဟန်ြး​ပန်​လိုချင်​​နေမိတယ်​…အမေ… အ​မေ…..အ​မေအိပ်​ရာနိုးနိုးချင်း ​တုန်​ရီရီလက်​တစ်​ဖက်​၏ လိုက်​စမ်းကိုင်​ရှာမည့်​မျက်​နှာ​လေးတစ်​စုံကို သားရဟန်းအဆင်​သင့်​ပြင်​ထား​ပေးပါတယ် ​အ​မေ…. အ​မေ…..ဒီတစ်​ရက်​နှစ်​​ရက်​​လောက်​ဆို သားရဟန်းတို့ ​ဆေးရုံက​နေဆင်းလို့ရပြီလို့ ဆရာဝန်​​က​ပြောသွားတယ်​အ​မေ…. ဆရာဝန်​မျက်​နှာကြည့်​တာနဲ့ကို သားရဟန်းသ​ဘော​ပေါက်​ပါတယ်​…..​နောက်​တက်​လာမည့်​လူနာ​တွေအတွက်​ ဒီကုတင်​​ပေါ်မှာ သားရဟန်းတို့ကို အချိန်​​တွေဆက်​မဖြုန်း​စေချင်​တာ သားရဟန်းသ​ဘော​ပေါက်​ပါတယ်​အ​မေ … ဒါ​ပေမယ့် အ​မေ…..ဆရာဝန်​​တွေကိုများစွာ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​….သူတို့လဲအတတ်​နိုင်​ဆုံးကြိုးစား​ပေးခဲ့ကြတာကို သာရဟန်းမျက်​ဝါးထင်​ထင်​​တွေ့မြင်​ခဲ့ရတာပဲ…. အ​မေ…..ဖြစ်​နိုင်​ရင်​​လေ […]
KTV ကို ပုံမှန်သွားပေးခြင်းဖြင့် သင်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးများ
KTV ကို ပုံမှန်သွားပေးခြင်းဖြင့် သင်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးများ သင်ဟာ သီချင်းဆိုတာ ၀ါသနာပါသူတစ်ယောက်လား။ ဒီလိုဆိုရင် KTV တွေမှာ သီချင်းဆိုရတာကို သဘောကျမှာပေါ့။ တချို့လူတွေကတော့ KTV သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ မကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ KTV ဆိုတာ အပန်းဖြေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒီကို ပုံမှန်သွားရင် ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေတောင် […]
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတွေကို ချစ်မိတဲ့အခါ ဒီအချက်(၆)ချက်ကို လုပ်ပေးပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလည်းရှိ၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီး လွယ်လွယ်နဲ့မပြိုလဲတတ်တဲ့၊ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ယောကျာ်းလေးတွေက သဘောကျပေမယ့် လွယ်လွယ်နဲ့မချဉ်းကပ်ရဲပါဘူး။ ဒီလို မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်၊ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်၊ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နိုင်တယ် ၊ ဒါကြောင့် ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကို သဘောကျနေရင် ဒီအချက်တွေကိုလုပ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော် …. […]
July 11, 2019 Cele Love 0
အိမ်​စည်​သာဆိုရင်​ တရားခံသိ​အောင်​ က​လေးကိုအရင်​​ဆုံး​မေးမှာပဲ လို့ ရင်ဖွင့်​​လာတဲ့ ​ရွှေအိမ်​စည်​… သမီး​လေး ဗစ်​တိုးရီယားရဲ့အမှုကိစ္စဟာ မလိုအပ်​ပဲ အရှုပ်​အ​ထွေးများစွာနဲ့ ပြည်​သူအများ ရင်​နဲ့မဆံ့ခံစား​နေရတဲ့ အမှုကိစ္စတစ်​ခုဖြစ်​သလို နာမည်​ကြီးအနုပညာရှင်​​တွေဟာလဲ ဒီသက်​ငယ်​မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်​သက်​ပြီး ပြည်​သူ​တွေ နဲ့ တစ်​သားတည်းရှိ​နေခဲ့တာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အမှုမှန်​ကိုအမြန်​ဆုံး​ပေါ်​ပေါက်​​စေချင်​သူ​တွေရဲ့ အသံများစွာထဲကမှ အလှမယ်​​ရွှေအိမ်​စည်​ရဲ့ အမြင်​နဲ့ ရင်​ဖွင့်​ခံစားမှု​တွေကိုလဲ AlinnMyay […]
« 1 … 255 256 257 … 425 »